Njem ụgbọ ologo kacha Europe maka ndị bidoro | Save A Train
Home > Travel Europe > Njem ụgbọ ologo kacha Europe maka ndị bidoro
(Emelitere ikpeazụ On: 05/12/2020)
Onye ọ bụla nọ ebe a site na mpụga Europe? Setipu aka-gi ma ọ bụrụ na ị na-dị ka baffled site ọha na n'ụzọ dị ka m. Chọpụta, New York nwere ụzọ ụgbọ oloko, na Toronto na-agba metro, ma site na ma nke buru ibu, ụwa na-aga n’ihu n’ime ụgbọ ala. Ya mere, mgbe ọ bụla anyị na-ahụ onwe anyị na-eme ka ndị iwuli elu gafee ọdọ mmiri maka a fancy French baguette, ihe nwere ike inwe obere bogbuo. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'ihi mbụ Ngụọge, bụ ndị na-enweghị echiche kpọmkwem otú jikwaa ha Europe njem ụgbọ okporo ígwè, ka naanị ebe ha ga-aga.
Ma ọ bụ ọdịiche dị n'etiti Eurostar na Netwọ TGV Train (Tmmiri ozuzo a Gonu Vitesse) ma ọ bụ ịnwa ịnyagharịa ndoputa oche na tiketi dị elu, ya nwere ike niile na-a bit ukwuu. N'ihi na ndị dị ka furu efu ka m, anyị na-na chikọta ndi kacha mma njegasi na-enye gị Ultimate Europe Njem site Train maka Beginners.
Okporo ígwè Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Tiketi ụgbọ oloko dị ọnụ ala Weebụsaịtị N’ Thewa.
Njem ụgbọ oloko Europe Maka Ndị Ga-amalite 1: London
E nwere ọtụtụ ihe mere anyị na-na họọrọ London dị ka ndị mbụ na-akwụsị na a njem, ma n'ozuzu ya dị nnọọ na-eme ka ndị kasị uche. Si North America flights na London na-ugboro ugboro ma dị ọnụ ala, nke pụtara na ’ga-echekwa nnukwu ego ka ịgbagoro na Frankfurt ma ọ bụ ogige ndị Europe ọzọ.
London bụ nnukwu ehiwe na ị ga-enweghị nsogbu na-achọta ihe na-eme. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpụkpọ Harry, obodo bụ jupụtara n'akwụkwọ na nkiri zoro. Ọ bụrụ na ị gara n'ụlọ ihe nkiri, Soho bụ ụlọ nke nnukwu na ntụrụndụ Broadway, na ị pụrụ mgbe mgbe chọta tiketi na a discount.
Ị nwere ike mfe na-eji izu ebe a na-enweghị na-agwụ ike na-eme, mana opekata mpe, anyị na-akwado ụbọchị anọ. Ozugbo ị na-na na njikere ime na, ọ bụ oge isi gị ọzọ ebe.
Amsterdam na tiketi maka London
Paris na-aga London na tiketi
Tiketi si London na London
Brussels na London na tiketi
Nkwụsị ụgbọ oloko 2: Paris
Can nweghị ike kụrụ Europe na-etinyeghị oge na ụwa kachasị ihunanya obodo. The City of Ìhè bụ a kwesịrị-stop, ma ọ bụ gị na mbụ ma ọ bụ gị iri nleta, na luckily maka njem, na Eurostar ụgbọ okporo na-agba ọsọ fọrọ nke nta ọ bụla hour si London na Paris. The njem na-ewe obere n'elu 2 awa na Enwere ike ịgba akwụkwọ ụgbọ oloko maka ọnụ ala tupu oge eruo.
Anyị na-akwado okodu dịkarịa ala ụbọchị anọ ebe a dị ka nke ọma, mana ọ bụrụ oge ezumike gị dị obere ị nwere ike ịzọlata ya ka ọ bụrụ mmadụ abụọ.
Njem ụgbọ oloko Europe Maka Ndị Ga-amalite 3: Barcelona
Ọ bụ ezie na a na-esote na-akwụsị bụ nnọọ a njem ụgbọ okporo ígwè, i nwere ike iri uru nke a sleeper ụgbọ ala iji nweta snoo gị tupu ị rute n’obodo a dị n'ụsọ osimiri mmiri. Wepụta ntụgharị Gothic ma nwee ọ chụ ụfọdụ Churros akpọrọ akpọkị tupu ị gawa Parc Guell.
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke Barcelona bụ na Spain dị ọnụ ala karịa ndị agbata obi ya dị n'ebe ugwu, yabụ ị ga-enweta ọtụtụ maka gị ego ebea. Anyị na-akwado na-anọ ọ dịkarịa ala ụbọchị abụọ ebe a ileputa obodo.
Kwụsị 4: Nice Ville
Famous n'ihi na ya boardwalk na nnọọ nso Cannes, Nice Ville ruru eru ka ọ kwụsịtụ na njem ụgbọ oloko Europe gị. Mgbe obodo ya bụ bụghị dị ka nnukwu dị ka France isi obodo, ya na ọnọdụ dị nso ọtụtụ kwesịrị ụbọchị njem. First, isi Monaco na ejighi ise dollars na cha cha. Enwe fancy ụgbọala na-eso Formula 1 uzo na ụwa na-ama agbụrụ track. Osote, buru ụgbọ oloko na Cannes – ma ọ bụrụ na ị nọ ya n'oge ememme na-anya n'ihi na nnukwu siri!
Anyị na-akwado ma ọ dịkarịa ala ụbọchị anọ ebe a nye ohere maka njem ụbọchị ahụ niile.
Njem ụgbọ oloko Europe Maka Ndị Ga-amalite 5: Rome
The Italian isi obodo bụ a oriri n'ihi na anya. Site Spanish Nzọụkwụ na Trevi Iyi, Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na-agaghị ekwe gị omume breathtaking ije. Ọ bụrụ na agaghị ezu, nri bụ uru slavering n'elu. Ejiri mee pasta vies na ọhụrụ na gelato na buffalo mozzarella abịa site na ugbo.
Ọ ga-akwụwa aka ọtọ oge iji nọrọ na Rome, ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ka ya mgbe a kacha nta nke ụbọchị ise.
Kwụsị 6: Venice
M ga-remiss ma ọ bụrụ na m na-ekwu banyere Venice gị n'oge njem mbụ. Mgbe m na-nwere ihe kasị mma ahụmahụ (ọtụtụ njem nleta), obodo a bụ kwesịrị-do. N'etiti gondolas na ụgbọ mmiri ọha, you ga ahụ ụzọ gafere ụfọdụ saịtị kachasị ihunanya na Europe.
anyị na-akwado ọ nọrọ opekata mpe abalị abụọ na Venice tupu ibanye ụgbọ oloko ebe ị na-aga.
Milan na tiketi Venice
Padua na tiketi Venice
Bologna na tiketi Venice
Rome na tiketi Venice
Njem ụgbọ oloko Europe Maka Ndị Ga-amalite 7: Vienna
N'ebe a, anyị na-ahapụ ndị kasị gara aga na-aga a bit si ụzọ. Ọ bụ n'ihi na ezi ihe mere, ezie, dị ka ihe centrally-emi odude mba Europe ekwesịghị-ekwesịghị ileghara anya. Ndị a nwere flavor na flair nke ọdịda anyanwụ na ụfọdụ pụtara ìhè iche. na Vienna, nke a putara iwe kọfị omenala na ọnụahịa dị ala. Gịnị ọzọ nwere ike ị chọrọ?
Anyị nwere ike ikwu na ọ dịghị ihe ọzọ ụbọchị abụọ Vienna n'ihu na-akpụ akpụ na.
Salzburg na tiketi Vienna
Munich na tiketi Vienna
Graz na tiketi Vienna
Prague na Vienna tiketi
Kwụsị 8: Prague
Obodo a puku afọ a ma ama maka obodo ochie ya. Mgbe ị gara, echefula na-akwụsị Astronomical Elekere tupu n'isi ịhụ Nwa Jesus. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme, ochie ndị Juu Ghetto ka na-agba na-egosi na nke amanye inhabitation. Mgbe na n'oge ebe a ka e rụzigharịa ọtụtụ, ị ka nwere ike gaa na ya isii n'ụlọ nzukọ.
Anyị na-akwado ịnọ na Prague ma ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ iji nyochaa obodo ahụ.
Nuremberg ruo Prague tiketi
Munich na Prague tiketi
Berlin na Prague tiketi
Vienna na Prague tiketi
Njem ụgbọ oloko Europe Maka Ndị Ga-amalite 9: Berlin
A Agba Olee banyere anyị taa, Berlin taa bụ ehiwe nke hip German omenala. Ma ị na-achọ ileta ebe a na-ere hipster ma ọ bụ nka nka nwogharia dị ka a mma iri restaurant, Berlin bụ ebe ị chọrọ ịbụ. E nwere ibu nke ihe na-eme ebe a, tinyere a nleta remnants nke Berlin Wall. N'ezie, e nwere ihe nile omenala ngosi ihe mgbe ochie na veranda dị ka nke ọma.
Anyị nwere ike ikwu na ọ dịkarịa ala ubọchi atọ ebe a na-enwe niile Berlin nwere na-enye.
Frankfurt na-aga tiketi Berlin
Leipzig na tiketi nke Berlin
Hanover na Berlin tiketi
Kwụsị 10: Amsterdam
Ị na hụrụ ọwa mmiri na Venice, ma ọ dịghị ihe nwere ike kwadebe gị maka mma n'anya, n'usoro obodo nke Amsterdam. The Dutch isi obodo bụ n'ụlọ ka ụgbọ mmiri na anyịnya igwe kama ụgbọala, na ị nwere ike mfe na-eji oge gị nile ebe a gawping na ije.
Anyị na-akwado gị ka gaa Amsterdam ọ dịkarịa ala, ụbọchị atọ ebe a, ezie na ị ga-eme mma na anọ ma ọ bụ ise.
E nwere ya. Si London ka Amsterdam na n'ebe nile n'etiti, nke a bụ ihe nduzi kasị mma maka European ụgbọ okporo ígwè njem beginners. na Amsterdam, inwere onwe gị ịlaghachi London site na iji Save A Train, ma ọ bụ isi n'ụlọ nri si Netherlands.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Njem ụgbọ ologo kacha Europe maka ndị bidoro” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Na ndị na-esonụ njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- a njikọ bụ maka English ụzọ gasị ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ma inwere ike dochie es ka fr ma ọ bụ tr na ọtụtụ asụsụ ị họọrọ.
5 Best Fishing Places Na Europe Iji Enwe
Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Zọ njem Sweden, Train Travel UK, Travel Europe
Top 3 European Railways Ije Ozi Good Food
Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel UK, Travel Europe